Jos B. (Nicky Verstappen) PsyOp ugbu a na-ejikarị onye ọka iwu rịọ onye ọka iwu? : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 5 June 2019	• 6 Comments
Taa, enwere ọhụụ ọzọ gbasara Jos Brech na nicky Verstappen (lee Telegraph). JBre Bre, onye a na - akpọ Jos B. na mgbasa ozi ma anaghịzi egosi ya foto ma ọ bụ eserese. Ikpe ahụ malitere site na nkwupụta ahụ na onye nlekọta maka ịkọ ọdịnihu n'okwu a nwụrụ na nnukwu ihe mberede. Ị na-eche ozugbo ma ọ bụ akọnuche ya na-echegbu onwe ya mgbe ọ chọpụtara na ọ na-arụ ọrụ na PsyOp (ọrụ uche), chọrọ ikwu okwu ma ya mere a ghachacha ya? Anyị agaghị enwe ike igosi nke ahụ. Egwu dị mma.
Ihe ị nwere ike igosi bụ na a na-etinye uche niile n'okwu ikpe ahụ na mkparịta ụka gbasara DNA. Nke ahụ bụ na mberede banyere usoro Bayesian nke ịkọpụta ihe puru omume kama nke eziokwu doro anya na DNA nke Jos Brech, nke a chọtara n'ọnọdụ ya na-efu, jiri "ikpe ikpe ọnwụ" emeghị n'ezie maka igbu ọchụ, n'ihi na a dịghị egosi igbu ọchụ. Iwu ka ekwesighi ka ị jiri DNA nke ikpe A bụrụ ikpe B. Eziokwu ahụ bụ na Gerald Roethof ekwughị ihe ọ bụla megide nke a bụ ihe ọzọ na - egosi na anyị na - eme ihe gbasara ikpe ekpere n'ebe a. Nke a nwere ike ịkwụsị mkpochapụ nke Jos B. ozugbo.
A na-agbakwara mkparịta ụka ahụ ọzọ ka a ghara imetọ ya ma ọ bụ:
Onye ọka iwu bụ Gerald Roethof na-akọ akụkọ ahụ site n'aka onye dọkịta dọkịta Rob Bilo na-ekwu na nhụsịrị ahụ nke Nicky apụtaghị na nwata ahụ emejọla mmekọahụ: "Nke ahụ pụkwara ịkpata stools ma ọ bụ nhụsie ike."
N'aka nke a, nchọpụta uche na-egosikwa na Job B. na-arụ ọrụ, nke ahụ na-egosikwa akụkụ ọzọ n'uche ndị mmadụ na-eso echiche ahụ bụ na Jos B. kwesịrị ịbụ onye na-arụ ọrụ, ka onye ọ bụla ghara ịjụ ma anyị nwere ike na-arụ ọrụ ime uche (PsyOp) ịmebata iwu ọhụrụ.
Onye ikpe na-ahụ maka ọha na eze na-azaghachi na nkwubi okwu Roethof na ndị ọkachamara PBC na-atụle Jos B. "ezigbo mmadụ". "Ha na-egosikwa nsogbu, ya bụ pedophilia." #Nicky
- Saskia Belleman (SaskiaBelleman) June 5 2019
O doro anya na ọ dịtụghị ihe àmà nke igbu ọchụ ma ọ bụ mmegbu ọ bụla, ya mere, DNA nke (Onye omekome na-eme ebere?) Jos B., natara ya (mere?) Na-efu, ya mere ọ ghaghị ịbụ na e jiriwo ya (na-adịghị adị) ikpe ikpe Nicky Verstappen. Otú ọ dị, site n'ịkụgharị ọzọ na mmetụta nke ndị na-ekiri, a na-ewepụ uche site na mmejọ a na-ezighị ezi. N'eziokwu, ụlọikpe ahụ na-ebute iwu ọhụrụ (site n'ịkwado DNA) na iwu ọhụrụ. Eziokwu dị mfe nke Gerald Roethof na-ekwughị banyere nke a na-eme ka ọ bụrụ ọkàiwu (PsyOp).
Ma dị ka ọtụtụ ihe, a na-eji okwu PsyOp eme ihe maka ọtụtụ nzube. N'okwu a, Jos Brech ga-agwakwa ọkàiwu ya okwu. Nke ahụ bụ n'ezie usoro nile maka ọkpụkpọ PsyOp, n'ihi na ọ bụ maka ịmegharị ọtụtụ iwu dị ka o kwere omume, ya mere, ọ dị mkpa ka a rụọ ọrụ na ntụziaka ịchọrọ ịgbanwe iwu.
Na Thijs H. ikpe anyị ahụworị na a ghaghị ịghachite akwụkwọ nzuzo ndị ọkachamara na-ahụ maka ọgwụ na GGZ ruo oge ụfọdụ, n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụghị ihe oyiyi nke igwefoto na nkwupụta ndị ọrụ ahụ enweghị ike iji. N'okwu Jos B. ha chọrọ nkwupụta ahụ site na Jos B. na ọkàiwu (PsyOp) Gerald Roethof. Ya mere, a na-ewepụ ikike ndị nwe obodo na-aga n'ihu site na nzọụkwụ (lee ebe a). Otú ọ dị, ebe ọ bụ na ọ na-eme site na ọnwụ ikpe ọnwụ, ndị ihu abụọ na mgbasa ozi, ndị mmadụ ji obi ha nakwere ya. Ọ dịghị onye na-ahụ na mgbanwe a gbanwere na iwu nwere ike imetụta nwa amaala ọ bụla, n'ihi ya, ọ dịghị onye na-enweta ụzọ. Azụziri ndị inyom na ndị ụkọchukwu n'àkwà ka ha kpuchie ọnụ ha, n'ihi na ha ejiriwo okpueze ahụ ṅụọ iyi ma ọ bụrụ na okpueze ahụ ewebata iwu ọhụrụ site n'aka PsyOp, ha ga-akwado ma ọ bụ gbachi nkịtị.
The Thijs H. PsyOp ghaghị imebi nzuzo nzuzo na nke emeelarịrị taa
Tags: B., Brech, onye nhazi, dị njọ, agba, ọhụụ, Gerald, Hof, Jos, Ikpe ziri ezi, Nicky, ihe mberede, nwụrụ, OvJ, ikpe, ikpe, ikpe, Roethof, Verstappen
5 June 2019 na 15: 07
Mgbe e jidere Jos B nanị, Gerald Roethof kwuru ozugbo na DNA enwetaghị iwu na-akwadoghị, ma ọ gbachiri nkịtị. O nwere ike ịbụ na a kwadoro ya, n'ihi na ma ọ bụrụ na onye ọka iwu ga-agbasi mbọ ike na nke a.
O nwere ike ịbụ na a gwara ya ka o mee ihe ọ ga - eme ma ọ bụrụ na ọ bụ ezigbo ihe. A na-eme nke a iji mee ka ikpe ahụ dị ka ezigbo dị ka o kwere mee.
N'ihi na ikpe a ezighị ezi, ekwenyesiri m ike na nke a. Were eziokwu ahụ bụ na enweghi ike ikwu ọtụtụ ihe na-emekarị, ebe akwụkwọ bụ 'Ọnwụ Nicky Verstappen' na-egosi na onye na-elekọta ndị agha bụ Joos Barten maara ebe a ga-ahụ ahụ Nicky. E nwekwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-egosi na nke a bụ na ọ dịkarịa ala, o metụtara ya dị ka enyemaka na nke a.
Echere m na ebumnuche bụ ịnweta Jos B, ka udo dị na Heibloem laghachi. Ma na nlele anya nke ọma, ọ ga-esiri ike. N'ihi na olee otu a pụrụ isi mepụta akụkọ ziri ezi na Jos B dịka naanị onye na-eme ya? Tinyere eziokwu niile a maara, dị ka nke ahụ, ọ ga-ebugharị na ikiri mgbe ọ chọpụtara Nicky.
Echere m na ọ garaghị ebe niile ebe a. Emere nke a ka o wee nye DNA ya n'afọ gara aga. A sị na ọ bụghị cycled n'ebe ahụ, ọ ga-abata na foto. Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii nwụrụ na Iraq ma kwuo na ejide ya agaghịzi enwe ike imebi nkwupụta a.
Ihe kachasị ezi uche bụ na Jos ga-agọnahụ B ma kwuo na ọ maghị otú DNA si gbanye uwe. Mgbe ahụ enweghi ike ikpe ya ikpe, n'ihi na enweghi ihe àmà zuru ezu. Ma anyị na-ahụ na ọ na-agbatị ikpe ahụ. Ha nwere ike na-arụ ọrụ na akụkọ zuru ezu n'azụ ọnọdụ ndị a ma nke a ezubeghị - na enwere m ọchịchọ ịmata ma ọ ga-emezu. Ee ee, anaghị m ewepụ ihe ga-ekwe omume na a ga-egbu onye nhazi maka ọdịnihu. Ọ dị mwute na ụmụ mmadụ na-arịa ọrịa.
5 June 2019 na 15: 39
Oge na-ewepụghị akụkọ gị, m ga-achọ ịhụ ebe Roethof kwuru otu oge. Enweghị m ike icheta ma ọ bụ nyochaa ebe m nụrụ ka ọ na-ekwu. Eziokwu dị mfe na ọ na-esi ọnwụ na nke a yiri ka ọ ga - eme ka ọ bụrụ onye ọka iwu.
5 June 2019 na 17: 53
Echetara m na mkparịta ụka dị mkpirikpi n'okporo ámá mgbe e jidere Jos. Anaghị m ama ebe ọ bụ na ọ gaghị adị na ịntanetị. Mana echetara m nke a n'ihi na echerela m ma ọ bụghị iwu na DNN DNA enwetaghị iwu. Mgbe ọkàiwu ya kwuru otú ahụ, achọpụtara m otú ọ ga-esi soro arụmụka a. Anyị maara na site ugbu a, ọ dịghị mgbe ọ nụtụrụla ya ọzọ.
5 June 2019 na 18: 33
Ọkara ndị ọkàiwu na-arụ ọrụ na-ahụ maka ọchịchị. Nkera nke ọzọ anaghị eme nke a ma na-atụ egwu Dean, bụ onye na-elegide ndị ọkàiwu anya maka 'steeti', ma na-ele anya n'òtù mbụ. Na-atụ egwu ịbụ ndị ndị ọkàiwu nke ìgwè mbụ ahụ kwụsịrị. Ọ bụ ya mere ha anaghị eme ike ha niile.
Ndị ọkàiwu nke otu nke mbụ nwere ezigbo mmekọrịta na ndị enyi na ndị ikpe na Association Bar. Ogologo ihe ịga nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọta ọkàiwu dị otú ahụ. Ikwesighi inwe esemokwu iwu banyere ọnọdụ nke ụmụ okorobịa si na edemede. Mgbe ahụ, ha agaghị ewere ikpe ahụ ma ọ bụ ịghachite ikpe gị.
5 June 2019 na 23: 01
Ihe nyocha akwụkwọ akụkọ bipụtara isiokwu 'DNA match only chapter one of the file criminel' ikpeazụ 28 August. N'ime ya, Ton Broeders, bụ prọfesọ nke onye omempụ dị na Mahadum Leiden, kwuru, sị: "Ọ dị ịrịba ama na e nwetara DNA nke onye a na-enyo enyo n'ihi na ọ na-efu. Nke ahụ kwesịrị ịbụ ebe nchekwa data abụọ dị iche iche: ndị na-enyo enyo na ndị na-efu efu. "Dị ka akwụkwọ Ọrụ Mgbasa Ozi si dị ka iwu ahụ si dị, ma ọkàiwu B. nwere ike ịrụ ụka maka iwepụghị ihe àmà ahụ.
Ọ bụ ya mere iju na Roethof adịghị eji nke a na-agbachitere. Site n'ụzọ, isiokwu a yiri ka ọ kwụsịrị site na Trouw web Archive, ma enwere m ike ịchọta ya site na http://www.topics.nl.
6 June 2019 na 22: 53
Ya mere Jos ji ihe edere edere dika 'ihe onwunwe', dika Pauw nuru n'ehihie. O choghi ikpughere okwu ya, n'ihi na eji ihe nile emegide ya, o kwuru. Ihe mere o ji chee na nkwupụta a ga-abụ ihe bara uru emesị karịa mberede karịa m.
N'agha a, enwere m mkparịta ụka na onye na-ahụ maka mgbasa ozi na-ekwu na Jos nọ na-agba agba na uwe ụmụ igwu mmiri na Nicky nọkwa ebe ahụ. Nke a bụ otú DNA si mechie nicky nke ndị Nicky. Onye ahu kwuputara na o nuru ihe a site na mgbasa ozi. Ma eleghị anya, ihie ụzọ, n'ihi na apụghị m ịchọta ihe ọ bụla gbasara nke a. N'echi ya, onye a ehichapụrụ nzaghachi ya. Ọ ga - abụ na Jos ga - eji okwu dị otú ahụ mechaa.
" Anja Schaap na-efu ugbu a pụtara a PsyOp? Lee ihe mere (video)
Na-achọsi ike nke a na-egwu PBS ọrụ si Den Kolder »
Nleta nile: 14.676.807
Fraị Fraịdee: etu esi agbasa ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ maka mgbasa ozi LGBTI
Wilfred Bakker op Fraị Fraịdee: etu esi agbasa ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ maka mgbasa ozi LGBTI
XanderN op Fraị Fraịdee: etu esi agbasa ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ maka mgbasa ozi LGBTI